Xisbiga Jamhuuriga oo guul ku dhow - BBC News Somali
Xisbiga Jamhuuriga oo guul ku dhow
5 Nofembar 2014
Image caption Doorashada dhexe ee Mareykanka
Xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa u muuqda mid guul ka gaaraya doorashooyinka dhexe ee dalkaasi ka socda. Xisbiga ayaa u baahan in uu ku guuleysto lix kursi si uu hogaanka ugu qabto aqalka Senate-ka.
Laba ka mid ah kuraastaasi waaba ay ku guuleysteen, mid kalana qarka ayay u saaran yihiin. Hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka senate-ka, Mitch McConnell ayaa did ugu guuleystay kursigiisa gobolka Kentucky.
In kasta oo doorashada dhexe loogu jiro dhammaan kuraasta aqalka wakiilada ee Mareykanka, ayaa haddana waxaa si gaar ah indhaha looga hayaa golaha senate-ka, gaar ahaan lixda kursi ee uu xisbiga Jamhuuriga u baahan yahay si uu hoggaanka ugu qabto aqalka senate-ka.
Labada xisbi siyaasadeed ee Mareykanka ugu waaweyn ayaa malaayiin dollar oo ka badan lacagtii horay loogu bixin jiray ololaha doorashada dhexe ku bixiyay loolanka adag ee ay ugu jiraan kuraasta aqalka senate-ka gaar ahaan kan gobolka Iowa.
In kasta oo aanu doorashadan dhexe u sharaxneyn, ayaa haddana dadka intiisa badan waxa ay u arkaan mid tusaale u ah waxqabadka madaxweyne Barack Obama,
Taariikhduna waxa ay na bareysaa in doorashada dhexe ee Mareykanka uu guul ka gaaro xisbiga mucaaradka ah.
In kasta oo aan si dhab ah loo hubin isbedelka siyaasadeed eek a dhalan kara haddii xisbiga mucaaradka ah ee Jamhuuriga uu gacanta ku dhigo labada aqal ee uu ka kooban yahay Congress-ka Mareykanka, ayaa dhanka kale dadka adoroosa siyaasadda Mareykanka waxa ay saadaalinayaan in xisbiga ay u suuragali karto hanashada hogaankaasi.